विवाद « Janata Samachar
महानगरभित्र रहेका कतिपय सम्पदाहरु पुरातत्व विभागकै कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको तर त्यसको अपजस महानगरले लिनुपर्ने अवस्था आएको zf शाक्यले बताउनुभयो ।
नेकपाकाे पार्टी कार्यालयमा विवाद, दुबै पक्षकाे आआफ्नै दाबी
प्रदेश २ का प्रहरी कार्यालय अनुसार प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा रहेका नेकपाका पार्टी कार्यालयहरुमा सुरक्षा निगरानी बढाएको जनाइएको छ ।
कहाँ छ, नेकपाको ६ सदस्यीय कार्यदल ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवाद पुन: चुलिँदै गर्दा अघिल्लो पटकको विवादताका गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलमा रहेका नेताहरु बेखबर जस्तै देखिएका छन् । कार्यदलमा नरहेका
दूरी घटाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न पछिल्लो विवाद साम्य पार्न पार्टीका दोस्रो तहका नेता सक्रिय देखिएका छन् । पछिल्लो विवादले पार्टी विभाजनको खतरा बढेपछि दोस्रो तहका नेता
कांग्रेसमा विवाद बढ्यो, सामूहिक राजीनामाको तयारी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरुका बीचमा आन्तरिक रस्साकस्सी बढ्दै गएको छ । पार्टी महाधिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु
झिंगा हुनुभन्दा अरिंगाल गजब ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले गा बन्नुभन्दा अरिंगाल ठिक हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा अरिंगाल बनेर स्थीर सरकारको परिकल्पना गरिएको महरको
संसद् नभएका स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी खारेज भएको अध्यादेश पुनः ब्युँतने संशय पैदा हुँदा हाल त्यस्तो योजना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।